﻿7Simple Steps toaStress-Free Career Unsurprisingly, work stress is bad for your health and for your productivity. အလုပ်တွင်စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းဟာ သင့်အလုပ်မှာအဆင်မပြေစေရုံသာမက ကျန်းမာရေးကိုပါထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
by Ilya Pozin at LinkedIn
Tags: career stress job Jo
အလုပ်မှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားနေရပါသလား? သင်တစ်ယောက်တည်းခံစားနေရတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ၈၃ရာခိုင်နှုန်းသော အမေရိကန်အလုပ်သမားတွေဟာ အလုပ်တွေမှာ စိတ်ဖိစီးမှုများရှိနေတတ်ပါတယ်။ Harris Interactive for Everest College မှတိုင်းတာချက်များအရ ယခင်နှစ်က ၇၃ရာခိုင်နှုန်းမျှသာရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်မှုရှိလာခဲ့ပါတယ်။
အလျင်စလိုလုပ်နေခြင်းဟာ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်အဖွဲ့သားတွေကိုစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်နေတယ်လို့ Depaul တက္ကသိုလ်မှ ပရော်ဖက်ဆာ Robert S. Rubin မှဆိုပါတယ်။ အလျင်စလိုလုပ်လေလေ အာရုံစိုက်နိုင်ရန် ခက်ခဲလေလေဖြစ်ပါတယ်။
Conifer Research ၏ co-founder တစ်ဦးဖြစ်သော Ben Jacobson ဟာ "နေဖွဲ့စည်းမှုပုံစံထဲမှာတော့ ဘယ်သူကမှ အနှေးဆုံးရွေ့လျားနေတဲ့အရာဝတ္ထုအဖြစ် ရှိချင်နေကြမှာမဟုတ်ဘူး" ဟု Wall Street ဂျာနယ်သို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဘာအကြောင်းကြောင့် ရှင်းလင်းမှုများကင်းမဲ့နေရသနည်း?
လုပ်ငန်းခွင်မှမလိုအပ်သည့်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်သောအကြောင်းအရာများကို ဖယ်ထုတ်နိုင်သော ရိုးရှင်းတဲ့အချက်များကတော့
၁. Email များကိုစွဲလမ်းမှုလျော့ချပါ။
သင့် Email inbox ကိုမကြာခဏဖွင့်ကြည့်နေမိပါသလား။ အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေရင်း Email ဝင်လာတဲ့အသံကြားလို့ အလုပ်ကိုဖြတ်ပြီး email ဖွင့်ဖတ်နေမိခြင်းဟာအလုပ်ကိုဟန့်တားဖြစ်စေပါတယ်။
email စစ်သည့်အချိန်တစ်ခုကို သီးသန့်သတ်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။ နံနက်ခင်းတချိန်၊ ထမင်းစားချိန်တစ်ချိန်စသဖြင့် သတ်မှတ်ထားခြင်းဟာ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ အဟန့်အတားများမှ ကင်းဝေးစေပါတယ်။
၂. လုပ်ငန်းခွင့်၏ Drama များကိုရှောင်ပါ
လုပ်ငန်းခွင်တွင် အတင်းအဖျင်းပြောခြင်း၊ နိုင်ငံရေးအကြောင်းများပြောခြင်းအစရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ ၄၇ရာခိုင်နှုန်းသောအလုပ်သမားများရဲ့ အစွမ်းအစတွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေပါတယ်။
စိတ်ကိုဖိစီးစေမည့်ရိုင်းစိုင်းသောစကားများကို ရှောင်ပါ။ မကောင်းသည့်ဘက်ကိုဆောင်သည့် စကားဝိုင်းများကိုရှောင်ခြင်းဟာ လုပ်ငန်းခွင့်မှာ စိတ်ဖိစီးရခြင်းမှ ကင်းဝေးစေပါတယ်။
၃. မိမိကိုယ်ကို အနားပေးပါ
ထမင်းစားပြီးချိန်မှာ အိပ်ငိုက်လာတယ်လို့ခံစားနေရပါသလား။ ဒီလိုခံစားနေရတာဟာ ကိုယ်တယောက်တည်းမဟုတ်တာကိုသတိထားပြုပါ။ လေ့လာမှုများအရ လူတယောက်ရဲ့အိပ်အငိုက်ဆုံးအချိန်ဟာ နေ့လည် ၂နာရီဖြစ်ပါတယ်။
အချို့သောအလုပ်ခွင်တွေဟာ ခဏတဖြုတ်မှေးလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကြောင့် စိတ်အပြောင်းအလဲဖြစ်စေဖို့ Social Media website တွေမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောခြင်း တွေ့ဆုံခြင်းတွေလုပ်သင့်ပါတယ်။
၄. အကောင်းမြင်မှုများနဲ့ ဝန်းရံထားပါ
တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုကြည့်ရခြင်းဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကိုကင်းဝေးစေပါတယ်။ Hiroshima တက္ကသိုလ်မှ လေ့လာမှုများအရ ကြောင်ငယ်လေးများရဲ့ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးအလုပ်လုပ်ခြင်းဟာ အလုပ်ကိုပိုမိုပြီးစီးစေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများကိုလျော့ချရန်အတွက်အလုပ်ခွင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အကောင်းဖက်ကိုဖော်ဆောင်သောဓာတ်ပုံများကိုထားရှိသင့်ပါတယ်။ အပင်များ၊ နံရံကပ်ပုံများ၊ ကိုယ့်မိသားစုဓာတ်ပုံများ ကိုယ်ချစ်ခင်နှစ်သက်သူများရဲ့ ဓာတ်ပုံများကိုထားရှိသင့်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုအထက်လူကြီးတွေမကြားနိုင်ဘူးလို့ ထင်နေခြင်းဟာ အလွယ်တကူစိတ်ဖိစီးမှုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်သမားများရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံဟာ အလုပ်ရှင်များရဲ့မှာကြားချက်ဖြင့်ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင်လေးစားမှုရရှိနိုင်ရန်အထက်မှလူကြီးများကိုမကြာခဏ တင်ပြပေးပါ။ သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနဲ့စကားပြောပါ။ အလုပ်ဝန်ပိနေတယ်လို့ခံစားရတာနဲ့အထက်လူကြီးကိုချက်ချင်းပြောကြားပါ။
သင်သည် အရာအားလုံးလုပ်ကိုင်ချင်စိတ်၊ စိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ချင်စိတ်ရှိသော်လည်း တခါတရံတာဝန်ယူလိုစိတ်များခြင်းဟာလည်း သင့်အတွက်ဆိုးကျိုးများဖက်ကိုသာ ဦးတည်နေတယ်ဆိုတာကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။မိမိတာဝန်ယူနိုင်ရန်ခက်ခဲသောအရာများကို ငြင်းဆန်ခြင်းဟာ စိတ်ဖိစီးမှုရခြင်းကနေ ကင်းဝေစေပါတယ်။
အဆင်မပြေမှုများစွာကိုခဏမေ့ထားပြီး အလုပ်မှာအဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း မှတ်ထားပါ။ သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပြုလုပ်ထားသောအကြောင်းအရာတစ်ခု၊သင့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသော Project တစ်ခု၊ ဘာကြောင့် ဒီအလုပ်ကိုရွေးချယ်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိထားပါ။
စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်သင့်အလုပ်၊ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရည်တွေနဲ့ သင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကို အထိခိုက်မခံပါနဲ့။
Do you feel like you’re always stressed on the job? Unfortunately, you’re not alone. Some 83 percent of American workers say they often feel stressed at their jobs. If this isn’t bad enough, apparently our workplace lives are just getting more stressful. The same poll byHarris Interactive for Everest College found only 73 percent of workers cited frequent stress just last year, meaning our stress levels have risen by 10 percent in just 12 months.
Rushing around inafrenzy can actually infect your team with second-hand stress, according to DePaul University professor Robert S. Rubin. Plus, the more we rush, the less we’re able to focus on any one specific task.
“No one wants to be seen as the slowest moving object in the solar system. You have to keep up with the Joneses—literally,” Ben Jacobson, co-founder of Conifer Research, toldThe Wall Street Journal.
Whatever happened to workplace simplicity? It’s time to cut back on your stress by takingafew simple steps to declutter your work life. Here areafew ways to go back-to-basics and show your career stress the door:
2. Steer Clear of Workplace Drama
You came to your office to work and yet somehow your workplace has become more political than an episode of House of Cards. Office politics hurts company morale, and 47 percent of workers feel office politicking also hurts productivity. Sadly,astudy by by Robert Half International found 60 percent of workers felt like they had to play the game.
Instead of takinganap, which is still frowned upon in many workplaces, give yourselfalittle mental break. Takeafew minutes to check in with friends on social media or takeawalk outside to clear your head. Don’t stress if your attention is lagging -- instead, give yourself permission to let your mind wander.
To cut down on stress, surround your office space with positive images. Don’t leave your office or cubicle empty -- fill it with planets, posters, and pictures of loved ones. A positive work environment can work asapick-me-up when you get particularly stressed.
You might want to do everything and tackle every possible challenge, but sometimes the biggest challenge is finding the strength to say no. Taking on too much responsibility is the best way to end up burnt out and feeling frayed. Research by the University of California in San Francisco found people with difficulty saying no are more likely to experience stress. While unpleasant, sometimes the healthiest thing you can do is bow out gracefully and avoid overextending yourself.